दाइलाई चाहिएको थियो पाँचौं सन्तान, सरोगेसीको मद्दतबाट बहिनीले गरिदिइन् इच्छा पुरा (रोचक) - नेपाल कुरा
दाइलाई चाहिएको थियो पाँचौं सन्तान, सरोगेसीको मद्दतबाट बहिनीले गरिदिइन् इच्छा पुरा (रोचक)
प्रकाशित मिति: १६ बैशाख २०७८, बिहीबार April 29, 2021 , संवाददाता: Yukta
एजेन्सी । भाइ–बहिनीको सम्बन्धलाई समाजमा सबैभन्दा पवित्र मानिन्छ । तर जब यस्तैमा तपाईले सुन्नुहुन्छ कि बहिनीले आफ्नो दाईको बच्चा जन्माईन् भन्दा यहाँलाई कस्तो महसुस हुन्छ होला ? तपाईंलाई यो कुरा सुन्दा पक्कै अनौंठो लाग्न सक्छ होला । तर अमेरिकाको वाशिंगटनमा यस्तै एउटा घटना अगाडी आएको छ । यहाँ एक बहिनीले सरोगेसी मार्फत आफ्नो जेठो दाईको पाँचौं बच्चालाई जन्म दिएकी छिन् । बताउन चाहन्छौँ कि यो अमेरिका भर अहिले चर्चाको विषय बनेको छ ।
डेली मेलको एउटा रिपोर्ट अनुसार एक जना व्यक्तिको चार जना बच्चाबच्ची थियो तर उनलाई अर्को एउटा बच्चाको चाहना भयो । त्यस व्यक्तिलाई यस्तो लाग्दथ्यो कि उसको परिवारमा पाँचौं बच्चाको आगमनसँगै पूर्ण हुनेछ । यद्यपि उनकी श्रीमतीले मेडिकल समस्याका कारण पाँचौं बच्चालाई जन्म दिन सकेकी थिइनन् । यस्तो अवस्थामा, २७ वर्षीया बहिनी हिल्डे पेरिंगारेले आफ्ना दाइको इच्छालाई पुरा गर्ने अठोट गरिन् । अन्तत सरोगेसीको सहयोगबाट हिल्डे पेरिंगारेले आफ्नो भाइको पाँचौं बच्चा जन्माउन सफल भइन् ।
जनवरी २०२१ मा, हिल्डे पेरिँगरेले आफ्नो ३५ बर्षिय दाजु इभान शेली र ३३ बर्षकी उनकी पत्नी केल्सीको पाँचौं बच्चा जन्माइन् । धेरै अनौंठो तरीकाले जन्मेको यस बच्चाबाट अहिले सम्पूर्ण परिवारमा खुशीको वातावरण छाएको छ । गर्भावस्थाको समयमा बहिनी हिल्डेको सम्पूर्ण खर्च उनको भाईले व्यहोरेका थिए ।
यसमा चाखलाग्दो कुरा के छ हिल्डे पहिले नै विवाहित छिन् र उनका तीन बच्चाहरु छन् । यसको बाबजुद पनि उनले सरोगेसीबाट गर्भवती हुने निर्णय गरिन् । सरोगेसीको सहयोगबाट उनले आफ्नो भाइलाई पाँचौं बच्चा दिन सफल भइन् ।
खबरका अनुसार परिवारले बच्चाको लागि २०२० देखिनै कोशिस गरिरहेका थिए । यो विकसित मेडिकल साइन्सको कारण नै सम्भव हुन पाएको हो । सरोगेसीको माध्यमबाट जन्मेको बच्चा पूर्ण रूपमा स्वस्थ छ र आफ्ना आमा बुबाको साथ बाँचिरहेको छ ।
फोटो : carryingfromysister/instagram
जब गाईले कुकुर र बाख्रीलाई आफ्नो दूध पिलाईन्….
आजको आश्चर्यजनक १० रोचक तथ्यहरु !
आश्चर्यजनक १० रोचक तथ्यहरु (मंगलबार)